Rooble oo soo saaray liiska guddiyada doorashooyinka | KEYDMEDIA ONLINE
Inkastoo ay weli jiraan dhaliilo loo jeedinayo xubno kamida guddiga doorashooyinka heer federaal iyo heer dowlad goboleed, haddana RW Rooble ayaa soo saaray liiska xubnaha guddiyada doorashooyinka.
MUQDISHO, Soomaaliya – Ra’iisul Wasaaraha xukuumadda xil gaarsiinta Maxamed Xuseen Rooble ayaa soo saaray liiska guddiyada doorashooyinka heer federaal iyo heer dowlad goboleed iyo guddigii xallinta khilaafaadka.
RW Rooble oo dhagaha ka fureysanaya tabashooyinka xubno ka tirsan midowga musharaxiinta ayaa soo saaray caawa fiidkii magacyada xubnaha kamid noqonaya guddiyada doorashooyinka iyo xallinta khilaafaadka labadiisa heer.
Xubnaha ayaa la aaminsan yahay in ay ku jiraan 34 kamida kuwii hore ee cabashada laga keenay, iyadoo in la’eg intaasina lasoo baddalay, taasina waxay u muuqataa in aan la dooneyn in lawada qanciyo xubnaha cabashada soo gudbiyay ee midowga musharaxiinta, waxaana guud ahaan tiradii cabashada laga keenay loo qeebiyay laba kaddibna qeyb kamida lasoo baddalay, halka qeybta kale oo dhammaantood ah xubno xiriir dhaw la leh Farhad iyo Farmaajo ay weli meesha ka buuxaan.
Waxaa muuqata in lagu kadsoomay, rajadii laga qabayna ay sii yaraaneyso RW Rooble oo markiisii hore kamid ahaa shakhsiyaadka ololaha ugu jiray dib usoo laabashada Farmaajo iyo mar kale afar sano oo uu sii joogi doono xafiiska ugu sarreeya Soomaaliya ee Villa Somalia.
Sida uu dhigayay heshiiskii 27-ka May ee Golaha Wadatashiga Qaran ee lagu gaaray magaalada Muqdisho waxaa lagu ballamay in dib u eegis iyo wax ka baddalid lagu sameeyo guddiyadii doorashooyinka ee hore kuwaasoo ay qaarkood laga soo xulay xafiisyada ugu sarreeya dalka iyo kan Nabad Sugidda Qaranka.
Xubnahan waxaa ku jiraa laba ruux oo kamida kuwa shaqaalaha rayidka:
1. Caa'isha Abukar Qaasim oo 26 Febraayo 2017 loo magacaabay lataliyaha madaxweynaha ee dhinaca arrimaha bulshada iyo
2. Khadar Xariir Xuseen oo isna 10 April 2020 loo magacaabay in uu xubin ka noqdo xubnaha guddiga maamulka sare ee hay'adda NCRI